Minisiteran’ny fanabeazana Hahita loza ireo mpanodinkodim-bola
CEG ANTANIMBARINANDRIANA Nahatratra 20 ireo mpiadina BEPC tsy tonga
Miisa 20 ireo mpiadina tokony hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC no tsy tonga namonjy izany omaly, andro voalohany tetsy amin’ny CEG Antanimbarinandriana.
Laza adina CEPE 2019 Mpampianatra nitana T5 ve no nanome ny laza adina sa… ?
Anisan’ny fanontaniana napetraky ny mpitsara CEPE marobe io ny amin`ny laza adina CEPE farany teo.
Minisitry ny fanabeazam-pirenena “Tsy foanana izany ny PSE …”
Tsy foanana izany ny PSE na ilay rafi-pampianarana vaovao raha araka ny fanazavan-dRtoa Volahaingo Marie Thèrese, minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika.
Rafi-pampianarana eto Madagasikara Rahoviana ilay « tena izy » ?
Mitana ny sain’ny maro ilay fanatsarana ny fampianarana. Ny tetipivoaran’ny fanabeazana (PSE) norafetina sy efa nankatoavin’ny mpamatsy vola ny hanatanterahana azy.
Adina fanatanjahantena BEPC tetsy Mahamasina Saika tsy nanomboka, nitaky ny tambin-karamany ny mpanadina
Raikitra ny savorovoro tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina omaly tokony ho tamin’ny 10 ora maraina teo satria dia saika hikomy tsy hanomboka ny fanadinana ireo mpitsara ny
Taranja matematika Hampidirina kokoa amin’ny nomerika
Ny 16 ka hatramin’ny 25 jolay izao no hotanterahana eny amin’ny oniversiten’Antananarivo,
Anjerimanontolo « Miroso mankany amin`ny avo lenta”
Tontosa ny faran`ny herinandro lasa teo ny fametrahana amin`ny toerany ny filohan`ny oniversiten`i Fianarantsoa amin`ny alalan`ny Dr Rafamantanantsoa Andrainjato.
Hapetraka ny fomba fiasa vaovao sy fandrindrana asa ary ny fampitoviana fomba fijery amin’ny fanatanterahana ireo andraikitra sahanin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arak’asa araka ny toromarika tamin’ny fivoriana arak’asa notarihin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta,
Ntsay Christian omaly. Ilaina ny fanovana ny fomba fitantanana mba hahafahana mampandroso haingana dia haingana ny firenena ary mba hipaka mivantana amin’ny vahoaka ny vokatry ny asa atao. Mila manana soatoavina ny mpitarika tsirairay eto amin’ny firenena dia ny fahamarinana, mitarika any amin’ny mangarahara, indrindra eo amin’ny fitantanana ara-bola. Isika dia tsy tompon’ny vola, hoy ny praiminisitra, fa «mpiandry omby volavita, tsy tompony fa mpamerin-doha ». Araka izany, ho hentitra ny fitondram-panjakana amin’ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana, indrindra eo amin’ny fanolorana ny tsenan’asam-panjakana amin’ireo mpanao tolotra. Manomboka izao, dia tsy hisy intsony ny famindram-bola atao amin’ireo rantsa-mangaikan’ny minisitera raha tsy misy ny fandaharam-pampiasana izany mazava, ary ny tetibola homena ny ministera dia tsy miankina amin’ny fanitsinitsiana ny teo aloha intsony fa atao mifanaraka amin’ny vina izay napetraky ny filoham-pirenena izay voarakitra ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana sy ny filana takian’ny eny ifotony. Ity minisitera ity no mitana ny laharana faharoa amin’ny fandaharam-pampiasana ny volam-panjakana na « PIP », noho izy misahana ny fanarenana sy ny fanorenana fotodrafitrasa maro, ny fanampiana ara-bola ho an’ireo mpampianatra miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, ny fizarana ireo « kits scolaires », ny fampisakafona ireo mpianatra, ny fampitaovana eo amin’ny sehatry ny fampianarana,...
Mikasika ny rafi-panavaozana ny fampianarana na ny « PSE », indrindra ny mikasika ny tetiandrom-pampianarana dia nanamafy ny tokony hiverenana amin’ny fifampidinihan’ny rehetra voakasik’izany ny praiminisitra mba hahazoana vokatra mifanaraka amin’ny tena takian’ny zava-misy iainana ankehitriny fa tsy hanaraka an-jambany ny fanaon’ny firenena hafa isika.